Boqortooyada Eebeay: Qaar badan baa la casuumay laakiin… - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda As-Sajdah (Suuradda 32 – Ru kuucid) waxay sharraxaysaa kuwa tukada iyagoo u sujuuday oo markaas ku yidhi ajrigooda
Suuradda As-Sajdah32: 17
Suuradda Ar-Raxmaan (Suuradda 55 – Tafsiirka) 31 jeer oo laga soo qaatay aayadaha 33 – 77 ayaa su’aasha la weydiinayaa
Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan (Insi iyo Jinniyow)Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.
Suuradda Ar-Rahman55: 13-77
Hadday waxyaalaha wanaagsanu diyaar yihiin kuwa xaqa ah, waxaan u maleyn lahayn inuusan ninna nacfi doonin nimcooyinkaas xagga Rabbiga ka yimid. Taasi waxay umuuqataa mid nacasnimo ah. Laakiin Nebi Isa al Masih PBUH wuxuu baray masaal si uu inoo baray in aan ku jirno khatar dhab ah oo lagu diidi karo nimcooyinka Rabbi ee inagu keydisay. Marka hore dib u eegis yar.
Waxaan soo aragnay Ciise Masiix oo ereygiisa awooda leh uu cudurada iyo xitaa dabeecadaba Amarkiisa adeeceen.Waxaa kale oo isaga baray boqortooyada Eebe. Qaar badan oo ka mid ah nebiyadii Axdiga hore ayaa qoray wax ku saabsan Boqortooyada Eebe ee soo socota. Ciise wuxuu ku dul dhisay tan si uu u baro in Boqortooyadu ay soo dhowdahay.
Wuxuu marka hore baray wacdigii Buurta, isagoo tusinaya sida muwaadiniinta Boqortooyada Eebbe ay tahay inay is jeclaadaan. Ka fikir murugada, dhimashada, cadaalad darrada iyo argagaxa aan maanta la kulanno (kaliya dhageyso warka) maxaa yeelay ma dhageysanno waxbaristiisa ku saabsan jacaylka. Haddii ku noolaanshaha Boqortooyada Eebe ay ka duwan tahay nolosha cadaabta ee dunidan mararka qaar waxaan u baahan nahay inaan si gooni ah ula dhaqanno kalgacayl – jacayl leh.
Masaalka Xaflada weyn
Maaddaama dad aad u tiro yar ay u nool yihiin sida Ciise Masiix oo baray waxaad u maleyn kartaa inay aad u yar yihiin laguugu casuumayo Boqortooyada Eebe. Laakiin tani ma aha sidaas. Ciise wuxuu baray diyaafad weyn (xaflad) si loo muujiyo sida ay u balaadhan tahay uguna fog tahay casuumada Boqortooyada. Laakiin ma ahan sidii aan fileynay. Waxaana qoran sidan:
15 Kuwa cuntada ula fadhiyey midkood, goortuu waxaas maqlay, wuxuu isaga ku yidhi, Waxaa barakaysan kan kibis ku cuni doona boqortooyada Ilaah. 16 Wuxuuse ku yidhi, Nin baa casho weyn sameeyey, oo dad badan u yeedhay, 17 oo saacaddii cashada ayuu addoonkiisii u diray inuu kuwii loo yeedhay ku yidhaahdo, Kaalaya, waayo, haatan wax waluba waa diyaar. 18 Markaasay kulligood waxay bilaabeen inay fikir keliya ku marmarsiiyoodaan. Kii u horreeyey ayaa ku yidhi, Beer baan iibsaday, oo waa inaan tago oo aan soo arko. Waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato. 19 Mid kale ayaa yidhi, Waxaan iibsaday shan qindi oo dibi ah, oo waan tegayaa inaan imtixaamo. Waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato. 20 Mid kale ayaa yidhi, Naag baan guursaday, sidaa darteed ma iman karo. 21 Markaasaa addoonkii yimid, oo waxaas ayuu sayidkiisii u sheegay. Kolkaasaa sayidkii gurigu cadhooday, oo wuxuu addoonkiisii ku yidhi, Dhaqso jidadka iyo surimmada magaalada u bax oo soo kaxee masaakiinta iyo kuwa laxaadka la’ iyo indhoolayaasha iyo curyaannada. 22 Kolkaasaa addoonkii ku yidhi, Sayidow, waxaad amartay waa la yeelay, oo weli meel baa bannaan. 23 Markaasaa sayidkii wuxuu addoonkii ku yidhi, Jidadka iyo wadiiqooyinka oodaha u bax, oo dadka ku qasab inay soo galaan, si uu gurigaygu u buuxsamo. 24 Waayo, waxaan idinku leeyahay, Nimankaas loo yeedhay midkoodna cashadayda dhadhamin maayo.
Luukos 14: 15-24
Fahamooyinkeenna sheekadan ayaa marar badan lagu wareeray. Marka hore, waxaan u qaadan karnaa in Eebe uusan ku casuumi doonin dad badan Boqortooyadiisa (kaasoo ah diyaafadda guriga dhexiisa) maxaa yeelay isagu ma helayo dad badan oo mudan, laakiin taasi Casuumaadaa guriga dhexdiisa ah Waxaa u imaanaya dad aad iyo aad u tiro badan. Macallinka (Eebe ayaa masaaladan dhecdeeda) doonaya in bannaanka buuxsamo.
Laakiin waxaa jira weecino lama filaan ah. Dad Aad u yar oo ka mid ah martida ayaa runtii doonaya inay yimaadaan. Halkii ay marmarsiinyo ka dhigteen sidaas darteed iyagu ma aha inay sameeyaan! Oo Ka fikir sida aan macquul u ahayn marmarsiiyooyinka. Bal yaa dibiyadii iibsan lahaa isagoo aan hore u soo tijaabin isagoo aan iibsan? Ayaa iibsan kara dhul aan markii horeba fiirinaynin? Maya, cudurdaaradaasi waxay daaha ka qaadyaan ama cadeeynayaan ujeedooyinka dhabta ah ee quluubta martida – iyagu dan kama laha boqortooyada Eebe laakiin waxay leeyihiin danno kale.
Markaan ka fikirno Waxaa laga yaabaa inay suura gal tahay inay taasi macalinka ka careeysiin doonto oo dad aad u yar oo ka qayb galay xafladda ayaa ku jiri doona qaloocyo kale.. Hadda waa dadka ‘aan laga fileyn’, kuwa aan dhamaanteen maskaxda ugu tuurno iyagoo ah kuwo aan u qalmin in lagu casuumo xaflad weyn, kuwa ku sugan “jidadka iyo wadooyinka” iyo “waddooyinka iyo jidadka waddanka”, kuwaasoo “sabool ah , curyaan ah, indha la ‘iyo curyaan ah – kuwa aan had iyo goor ka fogaano – waxay casuumaad u fidiyaan xafladda. Martiqaadyada martiqaadka xafladaan aad ayey u sii bataan, waxayna daboolayaan dad ka badan adiga oo aan u maleyn lahaa inay suurta gal tahay. Macalinka martiqaadka ama diyaafadda wuxuu doonayaa dadka halkaa jooga oo xitaa wuxuu ku casuumi doonaa kuwa aan annaguna ku marti-qaadin guryaheenna.
Oo dadkani way imanayaan! Ma hayaan danaha kale ee la tartamaya sida beeraha ama dibiyada si ay uga leexiyaan jacaylkooda sidaa darteed waxay u yimaadaan goobta diyaafadda. Boqortooyada Eebe waa buuxsamaysaa oo doonistiisuna waa la fuliyaa!
Ciise Masiix ayaa masaalkan u sheegay si uu suaal nagu weydino ah: “Miyaan aqbali doonaa casuumaad Boqortooyada Eebe hadaan helo mid diido martiqaadka? Runtu waxay tahay in lagugu casuumay xafladan Boqortooyada, laakiin runtu waxay tahay in inteena badanba u diidi doona casuumaada hal sabab ama mid kale. Marnaba kuma dhihi doonno ‘maya’ si toos ah markaa waxaan bixinnaa cudurdaar si aan u qarinno diidmadeena. Gudaha hoose waxaan ku leenahay ‘kale jecel’ oo asal u ah diidmadayada. Masaalkan, xididka diidmadu waxay ahayd jacayl waxyaabo kale. Kuwii la soo marti qaaday markii hore waxay jeclaadeen waxyaalaha dunidan (oo ay matalaan ‘duurka’, ‘dibi’ iyo ‘guur’) in ka badan Boqortooyada Eebe.
Mataal ku saabsan hogaamiyahii Diimeed ee aan xaqqa ahayn.
Qaarkeen naga mid ah baa waxyaabahan adduunka ka jacel in ka badan Boqortooyada Eebe sidaa darteed waanu diidi doonaa martiqaadkaan. Qaar kale oo inaga mid ah ayaa jecel ama aaminsanaanta xuquuqdeena gaarka ah. Ciise Masiix wuxuu sidoo kale wax ku baray arintan sheeko kale isagoo adeegsanaya hogaamiye diimeed .
9 Masaalkan ayuu kula hadlay qaar ismoodayay inay xaq yihiin oo kuwa kale quudhsaday. 10 Laba nin ayaa tegey inay macbudka ku tukadaan; mid Farrisi buu ahaa, kan kalena cashuurqaade. 11 Farrisigii intuu istaagay ayuu waxyaalahan isugu tukaday, Ilaahow, waxaan kuugu mahadnaqayaa inaanan ahayn sida nimanka kale oo wax dulma, iyo kuwa xaqa daran, iyo dhillayaasha, ama xataa sida cashuurqaadahan. 12 Toddobaadkiiba laba kol ayaan soomaa, waxaan haysta oo dhanna toban meelood ayaan meel ka bixiyaa. 13 Laakiin cashuurqaadihii meel fog ayuu ka istaagay, ma uuna doonaynin inuu indhihiisa cirka u qaado, laakiin laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh, Ilaahow, ii naxariiso anigoo dembi leh. 14 Waxaan idinku leeyahay, Kan iyo kii kale, kan baa gurigiisa tegey isagoo la caddeeyey inuu xaq yahay; waayo, mid kasta oo isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa, oo kii is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa.
Luukos 18: 9-14
Waxaa jiray Farrisi (macalin diini ah sida imaam) wuxuu umuuqday inuu ku qumman yahay dadaalkiisa diimeed iyo mudnaantiisa. Soonka iyo zakada xitaa wuu ka badnaa wixii loo baahnaa. Laakiin imaamkan wuxuu aaminay xaqnimadiisa. Tani ma ahayn wixii nebi Ibraahim (PBUH) uu muujiyey waqti dheer kahor markuu helay xaqnimada isagoo si qumman u aamminay yabooha Eebe. Xaqiiqdii cashuur Qaade wuu is-hoosaysiiyay isaga oo aaminay in loo roonaaday, gurigiisuu ku tegey ‘isagoo xaq’ Eebe la jooga – halka Farrisiinta (imaam), oo aan u malaynayno inuu yahay ‘sax oo weliba dembiyadiisiina weli loo tirinayo.
Sidaa daraadeed Ciise Masiix wuxuu ku waydiinayaa adiga iyo aniga hadii aan si dhab ah u rabno Boqortooyadda Eebe, ama haddii ay tahay uun dano ka dhex jira danaha kale oo badan. Wuxuu sidoo kale na weydiiyaa waxa aan ku kalsoon nahay – mudnaantiisa ama naxariis Eebbe.
Waa muhiim in si daacad ah la isweydiiyo su’aalahan maxaa yeelay haddii kale ma aqoonsan doonno bariskiisa soo socota – in aan u baahan nahay Nadaafad gudaha ah.
Tags:boqortooyada ilaahay ee dhaawaca ahcilmiga waxyeeladaInjil la soo bandhigay Tagsisa in injilmaxuu ka yiri soonkamuxuu ka yiri boqortooyada IlaahMuxuu ka yiri zakadawaxbarida Isa al Masih